Mee 22 Ga-abụ Ụbọchị Ndị Biafra - Ụwazuruike
Gọọmenti Anambra Ejikere Iji Usoro Ọgbara Ọhụụ Ejikwa Àtịtị...
Dịka a sị na ọ na-abụ onye mara chukwaa abịrịja akwụ ya, ọ bara ya urù n'ozuzu òkè, gọọmenti steeti Anambra ejikerela ịbagide n'atụmatụ iji usoro ọgbara ọhụụ were ejikwa àtịtị (waste), bụ unyi na ihe ndị e kpofùrù n'ahịhịa na steeti ahụ, nakwa imeputagharị ha ka ha ghọrọzie akụnụba na ihe na-enye ego.
Nnewi South Na FRSC Ejikọọ Aka Ibèlàtà Ihe Mbere Okporo Ụzọ...
Ndị Ụkpọr Etoo Obianọ Maka Ọrụ Mmepe Ime Obodo...
Dịka a sị na etoo onye gburu ewu, ọ hụ ehi o gbuo, ndị obodo Ụkpọr, dị n'okpuru ọchịchị 'Nnewi South' nke steeti Anambra ebunyela aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ ụkpa ekele maka ezi mbọ ọ na-agba n'ịkwalite mmepe ime-ime obodo dị iche iche na steeti ahụ.
Igbu na Ịtọrọ Mmadụ N'Ime Ọnwa Anọ nke Afọ a...
Onyeisi ndị Uweojii n'ala anyị, Alhaji Mohammed Adamu, ekwuola na mmadụ dị otu puku na iri asaa na otu abụrụla ndị tufuru ndụ ha site na mkpa mkpa ndị omekome kpara n'ọnwa anọ mbụ nke afọ puku abụọ na iri na iteghete.
Sineeti Amapụtala N8.916trn Dịka Amụmà Ego Ọrụ Nke Ahọ 2019...
Ndị omebe iwu sineeti ala Nigeria amapụtala ego dị triliọnụ asatọ na ụma iri iteghete na abụọ dịka ego ọrụ nke ahọ 2019. Nke a gbasòrò nabata nke nkwekọrịta ndị òtù nlebà anya, bụ 'Senate Committee on Appropriation', ma bụrụkwa nke e kwupùtara n'ozuzu òkè n'ọgbakọ ndị omebe iwu ahụ nwere nso nso a n'Abụja.
E Jidela Otu Onye Aka Ya Dị n'Ogbugbu Onyeisi Obodo Nimo...
Dịka e kwuru sị na ihe ọ sọrọ nchì ya zogharịba n'ahịhịa, anya ga-ahụrịrị ya otu ụbọchị; aka ndị uwe ojii na steeti Anambra akpàrálá otu onye n'ime ndị ahụ a na-enyo ènyò na aka ya dị na mgbagbu ahụ a gbàgbùrù onyeisi ọchịchị obodo Nimo dị n'okpuru ọchịchị Njikọka, bụ maazị Frank Anthony Igboka.
Gọọmenti Ga-Akụkpọ Ụlọ Ọbụla E Ji Eme Mpụ Na Arụrụala -- Obianọ...
E meela ka a mara na gọọmenti steeti Anambra ga-amalitekwa ịkụtùsi ụlọ ọbụla e ji were eme mpụ ma na-arụkwa arụrụala dị iche iche dịka izo ohi, idebe ndị a tọọrọ atọrọ na omekoome ndị ọzọ na-eweta ala adịghị mma na steeti ahụ.
Ịgụ Akwụkwọ N'efu nke PTDF...
Mmadụ dị puku iri na iteghete, narị atọ na iri abụọ na atọ tinyere akwụkwọ maka ịgụ akwụkwọ n'efu na mba ofesi nke afọ puku abụọ na iri na iteghete na puku abụọ na iri abụọ nke ụlọọrụ PTDF na-achịkọba.
Naijiria Agbara Aka Ihe Olu...
N'agbanyeghị ohere niile ha nwere, Naijiria gbara aka ihe olu lata dịka egwuregwu ndị na-erubeghị afọ iri na asaa na mba Afrịka bịara n'isi njedebe tata na Tanzania. Naijiria ka ndị Angola jiri ọkpụ abụọ asatara nanị otu were merie dịka mba abụọ a zọrọ ndị nke atọ na Satọdee. N'agbanyeghị mmeri a, Ugo Ọlaedo Naijiria ga-esonye na nke mba ụwa niile na Brazil.
A Gbapeela Okporo Ụzọ Ọhụụ Ndị Ojoto Rụrụ, Nye Ya Aha Ọhụụ...
Ndị obodo Ojoto dị n'okpuru ọchịchị 'Idemili South' agbapeela okporo ụzọ ọhụụ ha rụrụ, bụ nke na-azabụ okporo ụzọ St. Barnabas, ma bàgharịzie ya aha ka ọ bụrụzie okporo ụzọ "Eze Oranyelu''.
Dịka otu n'ime ihe dị iche iche e wepụtasịrị iji merube mmemme icheta na ọ gbaala ahọ iri na asatọ kpọnkwem e jiri kwupụpụtanwee nnwere onwe ala Biafra ọhụụ, bụ nke e mere n'abalị iri na abụọ ahọ 2000; onye ndu otu ''Biafra Independent Movement'' bụ maazị Ralph Ụwazuruike akpọkuola ndị otu Biafra ahụ niile ka ha nuputa n'igwè ma mee ngaraghị n'ụzọ awara awara dị iche iche dịgasị na steeti ebe ha nọ, n'abalị iri na abụọ nke ọnwa a.
Maazị Ụwazuruike mere ka a mara nke a site n'ozi ọ kụpụụrụ ndị nta akụkọ, bụ nke Maazị Chris Mocha, bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi ndị otu ahụ binyere aka na ya. Dịka ozi ahụ siri kwuo, ngagharị ahụ ga-ewere ọnọdụ na Benin bụ isi obodo steeti Edo; Port-Harcourt bụ isi obodo steeti Rivers; Asaba bụ isi obodo steeti Delta; Yenegoa bụ isi obodo steeti Bayelsa; Enugu bụ isi obodo steeto Enugu; Ọnịsha, dị na steeti Anambrz; Aba nke steeti Abịa; Owerri nke steeti Imo; Uyo bụ isi steeti Akwa Ibọm; tinyere Abakaliki bụ isi obodo steeti Ebonyi.
Ọ kọwara ịke dịka ịgbaso ụkpụrụ ikewapụta ala Biafra dịka obodo kwụụrụ onwe ya pụọ na Nigeria n'ụzọ udo na na-enweghị nsogbu ọbụla. O kwuru na ala Biafra ga-enwererịrị onwe ya, ma kọwaa na ebumnobi e ji achịkọba mmemme ahụ nke ahọ a bụ iji dọta anya, enyemaka na ntụnye nke otu mba ụwa n'oku ahụ ụmụafọ ala Biafra na-akpọ na ndụdọ ha na-adọ iji kewapụ onwe ha n'ala Biafra ma bụrụ mba kwụụrụ onwe ya.
Maazị Ụwazuruike kpọkuzịkwara gọvanọ Willie Obianọ nke steeti Anambra ka o megharịa ahụ iji hụ na a tọhapụrụ mmadụ iteghete ahụ bụ ndị otu MASSOB e ji eji, ọ kachasị ndị a kpọchiri n'ụlọ nga dị na steeti Anambra, nke gụnyere: Chukwuma Nwọba, Longinus Akụegbu, Okechukwu Ọnụọrah, Anthony Wilfred, Sunday Igwe, Sunday Nweke, David Ota, Robinson Agbo na Onyebuchi Ezia, bụ ndị ndị ọrụ nchekwa nwụchikọrọ ma tụnye ha n'ụlọ nga tupuu e mee nhọpụta ọkwa gọvanọ e mere na steeti ahụ n'ahọ 2018.
Anambra Ga-Achọ Ijeri Abụọ Maka Ụgwọ Ọrụ Opekatampe...
Aka na-achị Anambra Steeti, Gọvanọ Willie Obiano, ekwuola hoohaa na steeti ahụ ga-achọ ijeri naira abụọ n'ọnwa ọ bụla iji were kwụọ ụgwọ ọnwa opekatampe ọhụrụ.
Guinea Emerie Ugo Ọlaedo...
Mba Guinea na Naijiria lụrụ ọgụ ka nwoke n'ime nkeji iri na iteghete na asọmpi mbụ nke na-eso nke ikpeazụ n'egwuregwu Iko Mba Afrịka na-aga n'ihu na Tanzania. Nkea butere penariti dị ogologo nke kwụsịrị oge Ogaga Oduko gbaliri nke ya n'eluigwe mere ka Syli Nationale nke Obere gaa n'ihu na-agbata nke ikpeazụ ụbọchị ụka n'agba nke iri na atọ egwuregwu ahụ.